Denim Abụọ Pocket Classic Button Down
Pụta na nke gị ino na Flowy Button Down na ya mara mma pastel agba? Na anụmanụ ink-ntụpọ ịmata. 100% Rayon.
A izu ụka na-arụ ọrụ dị mkpa, the Two Pocket Classic Button Down is a feweight button down with two chest pocket and the effortless fit. Yiri anyanwụ a na-acha ọcha denim nke akpọchiri, kegide ma ọ bụ dịka ọ dị n'ime ala na-anọpụ iche. 100% TENCEL Lyocell.
Ìhè dị ọcha 100% naịlọn, ìhè adịgboroja ala ndochi, uwe kachasị dịrị nchebe ma dị mma maka nwa gị, weta ọkụ na-enweghị mgbochi.
Jacketmụ nwoke na-agba ọsọ na jaket na akwa 100% polyester, 90/10 ọgazị na-ejuputa, uwe kachasị dịrị nchebe ma kachasị mma, na-enye ọkụ na-enweghị njide.
Nwa nwanyị ezigbo ala jaket nwere akwa dị mfe 100% naịlọn, 90/10 na-ejuputa, uwe kachasị mma maka gị, na-enye okpomọkụ na enweghị mgbochi. Nọgide na-ekpo ọkụ ma jiri mmiri na-asọ mmiri. Enwere ike izere ya ka mmiri zoo na mmiri ozuzo ma ọ bụ ụbọchị snow.
Ogologo ala jaket nwere akpa abụọ pụrụ iche, ọ bụghị naanị na ọ na-eme ka ị kpoo ọkụ, kamakwa ọ dị mma. 100% polyamide
Nwanyị ezigbo jaket na-eji akwa dị ọcha 100% naịlọn, 90/10 na-ejuputa, uwe kachasị mma maka gị, na-enye ọkụ na-enweghị mgbochi. Nọgide na-ekpo ọkụ ma jiri mmiri na-asọ mmiri. Enwere ike izere ya ka mmiri zoo na mmiri ozuzo ma ọ bụ ụbọchị snow.
Enwere ike kewaa otu uwe ụzọ abụọ, a na-echekwa akụkụ mpụta megide ifufe na mmiri ozuzo ， akụkụ dị n'ime ya jupụtara 90 ezigbo ala, ụdị ejiji na mmesapụ aka ， uwe ahụ niile dị ọkụ ma dịkwa mma.
Uwe A-Line Long Sleeve bụ nke dị mma na akwa dị nro. Ejiri ya na akpa anyị abụọ na-eji eriri agba agba na mmetụta ikuku. 100% TENCEL Lyocell.